3 ဘူဒါပက်ခြင်းအားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >3ဘူဒါပက်ခြင်းအားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးတော့ပြုပါတယ်. သင်ထည့်ပြီးပြီ မင်းရဲ့အားလပ်ရက်အတွက် အလုပ်မှာ, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရေတွင်းတစ်တွင်း-ထိုက်တန်တဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်ဟန်ဂေရီကူးခေါင်းနှစ်လုံး. ထိုရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်စဉ် – နောက်ဆုံးတော့, ဘူဒါပက်လှပသောမြို့ဖြစ်၏ – သာမြို့တော်တဝိုက်ကပ်နေဖြင့်ရေတိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မရောင်းကြဘူး. ဥရောပရထားခရီးသွားဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤဟန်ဂေရီပါဝင်သည်. ဒါကြောင့်သင်မြင်ရပါတယ်တခါ Szechenyi Thermal ရေချိုးခန်း နှင့်ဘီယာ Spa မှာပိုင့်ခံစား, ထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှပေါ်မြို့ထွက်ဦး3ရထားအကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်.
1. Debrecen, ဟန်ဂေရီ
ဒုတိယအကြီးဆုံးဟန်ဂေရီအတွက်မြို့နှင့်လည်းမဟာဟနျဂရေီရိုးရိုး၏မြို့တော်အဖြစ်လူသိများ, ဒီစည်ကားနေပါတယ်မြို့ကိုနေရာဖြစ်သည် 200,000 လူထု. သမိုင်းဝင်နဲ့လှပတဲ့, Debrecen ရုံဖြစ်ပါသည်2နာရီနှင့် 15 ရထားဘူဒါပက်ကနေမိနစ်. ၎င်း၏အနီးအနားဘူဒါပက်နေ့အဘို့ဒီဟာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းရထား trips စေသည်.
Debrecen အတွက်မဟာဘုရားကျောင်းမြို့တော်ရဲ့ focal point တစ်ခု, နှင့်ဟန်ဂေရီအတွက်ပရို၏သင်္ကေတအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို. ခရီးစဉ်ကိုမှသင်တို့အဘို့မြောက်မြားစွာပြတိုက်လည်းရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော Deri ပြတိုက်အဖြစ်, ဟန်ဂေရီသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးသမိုင်းဝင်အပိုင်းပိုင်းအချို့ရတာဟာအရာ.
အဆိုပါအချို့ကိုထုတ်ကြိုးစားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့ ဒေသခံအစားအစာ နှင့်စပျစ်ရည်, အဖြစ်ကောင်းစွာ. သင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့ sommelier ဆိုရင်, သင်တို့အဘို့အရွေးချယ်စေခြင်းငှါ “Bikaner”, ရန်စတဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်လုပ်သောစပျစ်ရည် “နွားအသွေး”. ဒါဟာဟန်ဂေရီအတွက်ထုတ်လုပ်မယ့်, ဒေသနာမည်ကျော် '' တင့်တယ်အမျိုးသမီးများ၏ချိုင့် '' အတွက်. yum!
သင်၏ပရိတ်သတ်ဆိုရင် အပူဗတ်, Debrecen သင်တို့ကိုလည်းဖုံးလွှမ်းထားသည်. အစဉ်အလာကနေထွက်ခွာခုနှစ်တွင်, the Aquaticum Spa is more like an indoor ရေကိုပန်းခြံ. မြင့်မားသောအမိုးခုံးမျက်နှာကျက်နှင့်ရောင်စုံရေဆလိုက် featuring, these thermal baths are fun for the whole family.
2. အကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ရထားဖြင့် Trips: ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
ရထားဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်များ၏ဤနောက်တစ်နေ့ entry ကိုများအတွက်, ကျနော်တို့လုံးဝဟန်ဂေရီထွက်ခွာနှင့်သြစတြီးယားမှဦးတည်နေ, ဟန်ဂေရီရဲ့အနောက်ဖက်အိမ်နီးချင်း. သြစတြီးယား၏မြို့တော်, ဗီယင်နာကိုကျော်ဖို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့နှင့်နေရာဖြစ်သည်2သန်းနေထိုင်သူများ. ဟန်ဂေရီတာလိုပဲ, ဗီယင်နာလည်းညုတလျှောက်တွင်တည်ရှိသည်. သေးငယ်တဲ့မြို့မတူဘဲ, သို့သော်, ဗီယင်နာကွဲပြားခြားနားသောရပ်ကွက်၏အပြည့်အဝထုပ်ပိုးနေသည်, ပြတိုက်, ဆွဲဆောင်မှု, နှင့်အစားအစာအမျိုးပေါင်း.
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတစ်အချက်အချာအဖြစ်လူသိများ, it also sportsathriving coffee scene and you’ll find hundreds of cafes along its winding streets. ဗီယင်နာလည်း Schonbrunn မှနေရာဖြစ်သည်, the summer residence of the Hapsburgs and one of many grand buildings throughout the city.
သငျသညျအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, ဗီယင်နာက၎င်း၏တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-stop ဖြစ်ပါတယ် ခရစ္စမတ်စျေးကွက်. ဤရွေ့ကားယဉ်ဆန်စျေးကွက်နတ်သမီးပုံပြင်အလင်းအိမ် twinkling နှင့်အတူမှော်၏ဘာမျှမတိုတောင်းများမှာ, ပူပြင်းတဲ့တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေစပျစ်ရည်ကို, နှင့်နွေးထွေးသောနှစ်သိမ့်အစားအစာ.
ခရီးမီးရထားကနေတစ်ဆင့်ဘူဒါပက်ထဲကနေတစ်ရက်ခရီးစဉ်များအတွက်ရှည်လျားပေမဲ့, မရပ်မနား options များနှင့်အတူရရှိနိုင်အစာရှောင်ခြင်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, သင်သည်သင်၏ချွတ်အခြားဥရောပတိုင်းပြည်စစ်ဆေးရလိမ့်မယ် ပုံးစာရင်း.
3. အကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ရထားဖြင့် Trips: Wiener Neustadt, သြစတြီးယား
နောက်ဆုံး, ကျွန်တော်တို့ဟာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး entry ကိုမှလာ, တောင်ဘက်ဗီယင်နာ၏တည်ရှိသောလယ်ပိုင်းအရွယ်မြို့. ဟုတ်ကဲ့, ဒါအမှန်ပဲ, ကြှနျုပျတို့သညျဤစာရင်းသည်အခြားသြစတြီးယားနေ့ကခရီးစဉ်ကိုကဆက်ပြောသည်င့်. အဘယ်ကြောင့်ရဲ့ကြောင်း? ကောင်းပြီ Wiener Neustadt ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဘေးဖယ်နေတဲ့ရယ်စရာနာမကိုအမှီရှိခြင်းကနေ), နီးပါးတစ်စည်ကားမြို့ဖြစ်၏ 50,000 လူထု, and it’s got it all in terms of things to do.
ဗီယင်နာကနေပဲ 30km တည်ရှိပြီးအလွန်ဟနျဂရေီသြစတြီးယားနယ်စပ်အနီးတွင်မီးရထားအားဖြင့်စုံလင်သောဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒီမြို့ရဲ့သမိုင်းအမျိုးမျိုးသောအင်ပါယာကနေထိန်းချုပ်ဘို့တိုက်ပွဲများနှင့်အတူထူပြောနေတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဤအတိုက်ပွဲများနေသော်လည်း- သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲက – Wiener Neustadt evolved into an important military training ground with the construction of the Maria Theresa Military Academy in the 1700s.
အတိတ်နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, ယနေ့ Wiener Neustadt အများအပြားအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများမှနေရာဖြစ်သည်, ပြင်ပတောင်တက်နှင့်ပန်းခြံများအများအပြားအပါအဝင်. သငျသညျအခြို့သောအလွတောင်တက်အဘို့အ Myra ရေတံခွန်သို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဦးခေါင်း Gesaeuse မှ အမျိုးသားဥယျာဉ် to take in the fresh air.
အဆိုပါမြို့မှာလည်းအများအပြားအထိမ်းအမှတရှိပါတယ်, ပြတိုက်, နှင့်ပြခန်းမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းသရုပ်ဖော်ထံအပ်နှံ. ဒီအားလုံးအသံသင်တို့အဘို့သိပ်ကြိုက်ခဲ့လျှင် – မစိုးရိမ်ပါ. လှုပ်ရှားမှုများအပြည့်အဝနေ့ကဆင်းအအေးအခွင့်အလမ်းများအတွက် Linsberg အာရှ Therme Spa မှခေါင်းပြီးနောက် (သို့မဟုတ်ထနွေး!) နှင့်အပန်းဖြေ.
Wiener Neustadt မှဘူဒါပက်
Wiener Neustadt မှဗီယင်နာ
Wiener Neustadt မှပရာ့ဂ်
ခကျြမြို့တော်ရထားဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်များအတွက်ဝေးလွန်းနည်းနည်းသော်လည်းဤမြို့ကိုလွဲချော်ခံရဖို့မဟုတျပါဘူး. သငျသညျသမိုငျးချစ်ကြလျှင်ကြောင့်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, အစာ, နှင့်အချိုရည်. ဒါဟာနီးပါးရဲ့နေစဉ် 8 ဘူဒါပက်ကနေရထားနဲ့နာရီ, သင်ဤလမ်းကိုဦးတည်နေလျှင်ဗီယင်နာကနေတဆင့်ခရီးသွားလာရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးင် (သင်သိလား, ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းကြောက်မက်ဘွယ်မြို့).
ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အဟောင်းအဆောက်အဦးများအပြည့်အဝ, ရေတွင်းတစ်တွင်း-ထိန်းသိမ်းထားအလယ်ခေတ်စတုရန်း, နှင့်ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး operating Astronomical နာရီ, ပရာ့ဂ်သင့်ရဲ့ဥရောပအားလပ်ရက်အပေါ်တစ်ဦး-do မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. ဤနေရာတွင်နှေးကွေးယူနှင့်ချားလ်စ်တံတားဖြတ်ပြီး strolling ပျော်မွေ့, ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး 1402. သို့မဟုတ်ပင်ပိုကောင်း, put on your finest royal uniform and head to Vysehrad for the day to check out the ancient ruins of the former castle.
ခရီးစဉ်ကိုမှဘူဒါပက်နေ့ကရထား trips နှင့်ဘူဒါပက်တစ်အံ့သြဖွယ်သောမြို့ဖြစ်၏. ယင်း၏လှပသော Boulevard မှစ. ၎င်း၏ကျော်ကြားအပူဗတ်မှ, တမြို့လုံးလွဲချော်တမဟုတျပါဘူး. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမကိုယ်အဘို့ပိုဒေသခံမှော်အချို့ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့တိုင်းနေတခါထွက်ဦး. သငျသညျအခြို့သောနွားထီးတကောင်ရဲ့သွေးစပျစ်ရည်ကိုရင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအသစ်တခုတိုင်းပြည်ချွတ်ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်အပေါ်မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်.
ရထားဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်များလုပ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးက – ရထားနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နယ်လှည့်များ၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်လုံခြုံမှုကိုခံစား တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “3 အကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ရထားဖြင့် Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / က de သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#နေခြည် #traveleurope ဘူဒါပက် Daytrips ရထားခရီးသွား TravelBudapest ပုဂံ TravelVienna